Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mivavaha ho an'ny nosiko. Mamely mafy an'i Kiobà i Irma!
Mivavaha ho an'ny nosiko. Mamely mafy an'i Kiobà i Irma.
Tena miaro ahy aho Kiobà.Ny toerana nahaterahako, ny toerana tiako indrindra, ary ny fireneko. Manantena aho fa hilamina ny rehetra.
Ireto ny sasany amin'ireo bitsika hita an-tserasera raha nanenjika an'i Kiobà tamin'ny rivodoza mahery sy orambe ny rivodoza Irma taorian'ny nandrava ny nosy Karaiba maro.
Natsangana tamin'ny sokajy 4 ka hatramin'ny sokajy 5 Irma dia tsy nanenina namely ny firenena Karaiba.
Tonga tany amin'ny Nososy Camaguey i Irma tamin'ny zoma lasa teo, nandrahona ireo tanàna amoron-tsiraka sy vohitra akaiky azy.
Ireo mpizahatany dia nentina tany amin'ny toerana azo antoka tany amin'ny hotely isan-karazany any amin'ireo faritra fialantsasatra maoderina. Sambany nisy rivo-doza sokajy faha-dimy namely an'i Kiobà nanomboka tamin'ny 1924.
Tamin'ny 03:00 GMT ny sabotsy dia nanana rivotra naharitra 257km / h (160mph) i Irma, araka ny filazan'ny National Hurricane Center any Etazonia.
Ny mason'ilay oram-baratra dia teo amin'ny 190km (120 miles) atsinanana atsinanana atsinanana atsinanan'ny tanàna mpanjono kioban'i Caibarien.
Misy fampitandremana momba ny rivo-doza ankehitriny any amin'ny faritanin'i Camaguey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, Villa Clara ary Matanzas.
Ny vondrom-piarahamonina sasany dia very herinaratra ary lasa mihasarotra hatrany ny fifandraisana amin'ny tanàna amin'ny faritra lavitra kokoa.
Nampiasain'ny Governemanta Kiobàna ny fananany rehetra ary bebe kokoa hiarovana ity tafio-drivotra ity nefa tsy hamono tena. Na ny feso aza, izay mampiala voly ireo mpizahatany any amin'ny valan-javaboary, dia nafindra tany Cuba.